Taageerayaasha Arsenal Oo Helay Aqbaar Aan Fiicneyn Ka Horay Kulan Leeds La Ciyaari Doonaan Horyaalka Premier League
HomeHoryaalka IngiriiskaTaageerayaasha Arsenal oo helay aqbaar aan fiicneyn ka horay kulan Leeds la ciyaari doonaan horyaalka Premier league
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Mohamed Elneny ayaa laga helay COVID-19 intii uu ku jira waajibaadka xulkiisa Masar, kadib markii saaxiibkiisa Mohamed Salah uu sidoo kale laga qaaday tijaabo viruska kadibne laga helay xanuunka.
Xiriirka kubada cagta Masar ayaa jimcihii xaqiijiyay in Salah uu seegi doono isreebreebka AFCON ee Togo kadib markii uu tijaabiyay labo jeer oo isku xigta lagana helay Viruska. Inta kale ee xulka Masar waxay tijaabiyeen caafimaadkood, waxaana ku jiray Elneny.
Waxaa la xaqiijiyey Elneny in oo qabo fayraska, wuxuuna ku noqday dalkiisa Masar, xulkiisa ayaa maanta la ciyaari doona Xulka Togo, waxaana kulankaas ka maqan Salah oo muhiim u ah dalka Masar.
Dhanka kale waxaa la filayaa in lagu sameeyo tijaabo caafimaad ka hor inta aan si rasmi ah looga saarin safarka Arsenal ee Leeds axada.
28 jirkaan khadka dhexe ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Gunners 2020/21, isagoo ciyaaray shan ka mid ah sideedii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaareen Premier League.
Taagaarayaasha kooxda Arsenal ayaa ka naxeen dhawaqa soo yeeray ee ku saabsan caafimaadka Elneny oo laga helay COVID19, qaab ciyaareed wanaagsan ayuu soo bandhigay kulamadii ugu danbeeyey ee u saftay kooxda Arsenal.